China Triaryl Isopropylated Phosphate emepụta na ngwaahịa | Uba
Triaryl Isopropylated Phosphate, IPPP35 bụ mmiri na-agbanwe agbanwe nke nwere ntakịrị ísì ụtọ, viscosity 78-85 (20 Celsius C), isi ọkụ 220 Celsius C, isi ihe na-agba agba 235-255 ° C (4 mmHg), ntụgharị ntụgharị 1.553-1.556 (25 Celsius) C), soluble na benzene, mmanya, klaasị ether.
Ọ bụ plasticizer na-enwu ọkụ nke nwere ezigbo nkwụsi ike hydrolytic, mmanụ magburu onwe ya na mkpuchi eletriki, nguzogide akwa na mgbochi antibacterial. A na-ejikarị ya eme ihe na PVC, polyethylene, akpụkpọ anụ, ihe nkiri, na mpempe akwụkwọ. , mpempe akwụkwọ, ebu ebu, n'ala ihe onwunwe, waya na USB, na sịntetik resin, roba na cellulose plasticizer, ire ọkụ retardant; nwekwara ike-eji dị ka a mmanụ ụgbọala mgbanye akara gị n'ụlọnga, n'í griiz oké mgbali mgbochi eyi gị n'ụlọnga na sịntetik ire ọkụ retardant haịdrọlik mmanụ mmako.
Ọdịdị: colorless ma ọ bụ ìhè edo edo transperent mmiri mmiri
Ike ndọda (20 Celsius): 1.183
Ihe ngbanwe nke oma (P%): 8.6
Uru acid (mgKOH / g): 0.1
A na-atụ aro Triaryl Isopropylated Phosphate dị ka ọkụ na-ere ọkụ maka PVC, polyethylene, leatheroid, ihe nkiri, eriri, waya eletriki, polyurethanes na-agbanwe agbanwe, mkpụrụ osisi cellulosic, na roba sịntetik. A na-ejikwa ya dịka enyemaka enyemaka ire ọkụ maka resins injinia, dị ka PPO gbanwere, polycarbonate na ngwakọta polycarbonate. Ọ nwere ezigbo arụmọrụ na nkwụsi ike mmanụ, ikewapụ eletriki, na mmegide ero.
A na-ejikwa ihe a na ngwaahịa ndị a: lubricants na griiz, ngwaahịa mkpuchi, polymer, adhesive na sealants, ọgwụ ọgwụ na mmiri hydraulic. Enwere ike ịwepụta ihe a na gburugburu ebe obibi site na iji ụlọ ọrụ mmepụta ihe: usoro ngwakọta, usoro ihe eji emepụta, yana usoro mmepụta isiokwu.
A na-arụpụta Triaryl Isopropylated Phosphate na / ma ọ bụ na-ebubata na European Economic Area na 1 000 - 10 000 tonnes kwa afọ.
Ndị na-eri ihe a na-eji ihe a, isiokwu, ndị ọkachamara ọkachamara (ojiji zuru ebe niile), na nhazi ma ọ bụ na-akwakọba ihe ọzọ, na saịtị ndị mmepụta, na n'ichepụta ihe.
Inye na triaryl isopropylated phosphate price consult, Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd, n'etiti ndị magburu onwe triaryl isopropylated phosphate emepụta na China, na-eche ka ị zụta nnukwu ippp 65, reofos 65 na-etolite ụlọ ọrụ ya.
1．Synonyms: IPPP, Triaryl phosphates Iospropylated, Kronitex 100, Reofos 65, Triaryl phosphates2. Molekụla arọ: 3903. CAS NO .: 68937-41-74．Uladị: C18H15 R3O4P5． Nkọwapụta: Ọdịdị: Mmiri na-acha odo odo ma ọ bụ na-acha odo odo na-acha odo odo Specific Gravity (20/20 ℃): 1.15-1.19Acid Value (mgKOH / g): 0.2 maxColor Index (APHA Pt-Co): 80 max 1.556Viscosity @ 25 ℃, cps: 64-75Phosphorus Ọdịnaya%: 8.0min6. Ngwugwu: 230kg / iron drum net ， 1150KG / IB CONTAINER, 20-23MTS / ISOTANK.This ngwaahịa a dị ize ndụ ibu: UN3082, KLAS 9
Inye na triaryl isopropylated phosphate price consult, Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd, n'etiti ndị magburu onwe triaryl isopropylated phosphate emepụta na suppliers na China, na-eche gị ka ị zụta nnukwu triaryl isopropylated phosphate na-emepụta ụlọ ọrụ ya.